महन्थ र राजेन्द्रले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउँदैमा ओलीको कुर्सी जोगिएला ? - Sankalpa Khabar
महन्थ र राजेन्द्रले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउँदैमा ओलीको कुर्सी जोगिएला ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुर्सी जोगाउन मरिमेटेर लागेका छन् । भारतको दबाबमा ठाकुर र महतो ओलीलाई काँध हाल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
त्यसैले अहिले बरु पार्टी फुटोस् तर ओलीको कुर्सी जोगियोस् भनेर दुवैले कार्यकारिणी सदस्य र सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन थालेका छन्। जुनसुकै बेला पनि आवश्यक कदम चाल्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै ठाकुर र महतोले हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्। आवश्यक परे जसपा विभाजन गर्नेसम्मको निर्णयमा ठाकुर र महतो पुग्ने भएका छन् ।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले यसअघि हस्ताक्षर गरेर लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गरेको रिस फेर्न ठाकुर र महतोले आफ्नो पक्षमा यति सांसद छन् भन्दै ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि ठाकुर र महतोले आफूनिकट सांसद र कार्यकारिणी सदस्यलाई काठमाडौंसमेत बोलाएका छन्।
जसपाको कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ । त्यसमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन्। ५० सदस्य कायम रहेको कार्यकारिणी समितिमा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बहुमत छ। उनीहरूसँग २६ सदस्य छन् । उपेन्द्र पक्षसँग १८ सांसद छन् ।
पुष्कर लोहनीका तन्का कविता
२९ जेष्ठ १०:१०